What if lactating mother is sick? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နို့တိုကျမိခငျတှေ ဖြားတဲ့အခါ အမေးအမြားဆုံးမေးခှနျးတှကေ:
“ဆရာမ ကြှနျမကလေးကို နို့တိုကျလို့ရလား?”
->အဖွကေတော့ တိုကျလို့ရပါတယျ။မိခငျဖွဈသူနမေကောငျးလို့ ကလေးကို နို့တိုကျလို့မရဘူးဆိုတဲ့ ရောဂါအခွအေနမြေိုးက အတျောရှားပါတယျ။
->မိခငျနို့ရညျကတဈဆငျ့ ကလေးဆီကို အဖြားမကူးပါဘူး။သငျ့နို့ရညျကတဈဆငျ့ သငျ့ကလေးဆီ ကိုယျခံစှမျးအားမြား ပို့ဆောငျပေးပါတယျ။ဒါကွောငျ့ သငျ့ကလေးကိုယျခံစှမျးအားပိုတကျလာပွီး အလှယျတကူမဖြားတော့ပါဘူး။
->ဂရုစိုကျရမယျ့အခကျြကတော့ မိခငျဖြားနခြေိနျတှငျ ကလေးနဲ့မကျြနှာခငျြးနီးနီးကပျနခွေငျးရှောငျကွဉျပါ၊ကလေးအနီးအနားတှငျ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊နှာခခြွေငျး ရှောငျကွဉျပါ။လကျမကွာခဏဆေးကွောပါ။
အမသေောကျတဲ့ဆေးတှကွေောငျ့ ကလေးကို ထိခိုကျမှာလား?
->ဆေးရုံဆေးခနျးပွတဲ့အခါ ဆရာဝနျဖွဈသူအား မိမိမှာ နို့သို့ကလေးရှိကွောငျး ကွိုတငျအသိပေးထားပါ။ထိုအခါ ဆရာဝနျအနနေဲ့ ရောဂါအတှကျ အသငျ့လြျောဆုံးနဲ့ ကလေးအတှကျထိခိုကျမှုအနညျးဆုံးဆေးကို ရှေးခယျြညှနျကွားပေးပါလိမျ့မယျ။
->မိမိသဘောနဲ့ ဆေးဆိုငျက ဝယျသောကျခွငျး၊စပျဆေးဝယျသောကျခွငျးသညျ မိမိကိုယျတိုငျကိုသာမက နို့သို့ကလေးငယျကိုပါ ထိခိုကျနိုငျတာကွောငျ့ ပိုအန်တရာယျမြားပါတယျ။
ဘယျလိုမိခငျတှကေ ဆေးသောကျတဲ့အခါ ပိုသတိထားသငျ့သလဲ?
->ရရှေညျဆေးစှဲသောကျရမယျ့ မိခငျတှေ အနနေဲ့သောကျရမညျ့ ဆေးကို ဆရာဝနျနဲ့သခြောဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီး ပိုသတိထားရပါမယျ။
->မိခငျနို့အပွငျ နို့ဘူး၊ဖွညျ့စှကျစာ၊အစာမာ စားနတေဲ့ကလေးတှကေ မိခငျသောကျတဲ့ ဆေးရဲ့ဒဏျကို ခံရနိုငျခပြေိုနညျးပါတယိ။
နို့တိုက်မိခင်တွေ ဖျားတဲ့အခါ အမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေက:
“ဆရာမ ကျွန်မကလေးကို နို့တိုက်လို့ရလား?”
->အဖြေကတော့ တိုက်လို့ရပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူနေမကောင်းလို့ ကလေးကို နို့တိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ ရောဂါအခြေအနေမျိုးက အတော်ရှားပါတယ်။
->မိခင်နို့ရည်ကတစ်ဆင့် ကလေးဆီကို အဖျားမကူးပါဘူး။သင့်နို့ရည်ကတစ်ဆင့် သင့်ကလေးဆီ ကိုယ်ခံစွမ်းအားများ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့် သင့်ကလေးကိုယ်ခံစွမ်းအားပိုတက်လာပြီး အလွယ်တကူမဖျားတော့ပါဘူး။
->ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ကတော့ မိခင်ဖျားနေချိန်တွင် ကလေးနဲ့မျက်နှာချင်းနီးနီးကပ်နေခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ၊ကလေးအနီးအနားတွင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊နှာချေခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။လက်မကြာခဏဆေးကြောပါ။
အမေသောက်တဲ့ဆေးတွေကြောင့် ကလေးကို ထိခိုက်မှာလား?
->ဆေးရုံဆေးခန်းပြတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဖြစ်သူအား မိမိမှာ နို့သို့ကလေးရှိကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။ထိုအခါ ဆရာဝန်အနေနဲ့ ရောဂါအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးနဲ့ ကလေးအတွက်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဆေးကို ရွေးချယ်ညွှန်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
->မိမိသဘောနဲ့ ဆေးဆိုင်က ဝယ်သောက်ခြင်း၊စပ်ဆေးဝယ်သောက်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်ကိုသာမက နို့သို့ကလေးငယ်ကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ပိုအန္တရာယ်များပါတယ်။
ဘယ်လိုမိခင်တွေက ဆေးသောက်တဲ့အခါ ပိုသတိထားသင့်သလဲ?
->ရေရှည်ဆေးစွဲသောက်ရမယ့် မိခင်တွေ အနေနဲ့သောက်ရမည့် ဆေးကို ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ပိုသတိထားရပါမယ်။
->မိခင်နို့အပြင် နို့ဘူး၊ဖြည့်စွက်စာ၊အစာမာ စားနေတဲ့ကလေးတွေက မိခင်သောက်တဲ့ ဆေးရဲ့ဒဏ်ကို ခံရနိုင်ချေပိုနည်းပါတယိ။